Jadwalka Tareenka Tabriz-Van wuxuu bilaabmayaa Maanta | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya98 IranTebriz-Van Tareeno Biloow Maanta
18 / 06 / 2018 98 Iran, Aasiya, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Gaadiidka, Wasiirka Arrimaha iyo Communications Maritime Ahmet Arslan, dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah ay sabab u tahay 2015 sano laga saaray markii Turkey (Van) - waqti Iran (Tabriz) 18 tareen rakaab ay ayaa ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto in July.
Maanta, adeegga rakaabka tareenka ee ugu horreeya ee u dhexeeya Van iyo Tacruz ayaa bilaabi doona ka dib fasaxa 3. Go'aanka lagu bilaabayo adeegga tareenka ayaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen gaadiidka TCDD iyo RAI ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.
Tareenka ugu horreeya ee rakaabka ayaa ka baxaya Tidriz, Iran, wuxuuna yimaadaa Van. Markii ugu horeysay ee laga soo bilaabo Van 19 waxaa la qaban doonaa Talaadada bisha June. 2 maalmood laga soo bilaabo Tabriz ilaa Van, iyo maalmaha 2 ilaa Taarrib. Waxaa jiri doona isugeyn ah duulimaadyada 4 todobaadkiiba.
XADGUDUBKA XADIISKA 240
Tareenka Tabriz-Van waxaa lagu qalabayn doonaa baabuurta 4 oo wadarta rakaabka wadarta tareenku noqon doono 240. Masaafada dheer ee 331 inta u dhaxaysa saldhigga baxa tareenka iyo saldhigga Arrival wuxuu dabooli doonaa saacadda 8.
SIDEE AYAAD TALEEYEY DALKA TALYAANIGA?
Turkey (Van) - Iran (Tabriz) ayaa ku dhawaaqay euros 10.80 tababari doonaan lacagta.
Duulimaadyada Van Iran ee Tikidhada 18 ayaa bilaabanaya June
Adeegyada tareenada xawaaraha sare ee Eskisehir Konya ayaa bilaabmaya maanta (Warbixinta Gaarka ah)
Magaca Cusub ee Gaadiidka ee Van Belvan Ka Bilowday
Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran
Xilliga Bixinta wuxuu bilaabmaa gaadiidka dadweynaha ee Sakarya
Horumarinta weyn ee qaybta 8
caalamka ayuu yiri:
Sida loo iibsado tareenka Van Tabriz Weli majiraan bisha 1 ee Tcdd.